Myanmar Security Expo |
Emerging Myanmar Security market
MSX2018 အားလာရောက်လေ့လာ လည်ပတ်ရင်းကံစမ်းနိုင်ပါပြီ !*
၂၀၁၉ဇူလိုင်တွင် စင်္ကာပူ နိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် INTERPOL World ပြပွဲကြီးအား သွားရောက်လေ့လာနိုင်မည့် အသွားအပြန်လေယာဉ်လတ်မှတ်တစ်စုံ စုစုပေါင်း ၃စုံ ကို ပြပွဲကျင်းပနေစဉ် နေ့စဉ်မဲဖောက်ပေးသွားမည့် အပြင် ဒေါ်လာ၁၀၀၀ကျော်တန်အခြားဆုမဲ များစွာအားလည်း နေ့စဉ်မဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုပင် အွန်လိုင်းမှတဆင့် အမည်စာရင်းပေး မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါပြီ။
နေ့စဉ် လေယာဉ် လတ်မှတ် တစ်စုံဆီမဲဖောက်ပေးသွားမည်။
မိမိအမည်နှင့် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပြီး ဖြစ်ရမည့် အပြင် အဆိုပါပြပွဲ သို့ အမှန်တကယ်လာရောက်လေ့လာသူဖြစ်ရမည်။
ပြပွဲကျင်းပရက် ၃ရက်အတွင်းတွင်သာ ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
The most important business platform serving the Myanmar security market.
From surveillance products and services, perimeter security solutions, access control management systems, biometric systems, RFID and smartcard technologies, data security solutions to fire and safety equipment, Myanmar Security Expo is poised to be the most important business platform for international manufacturers to interact, network and showcase their technologies to buyers from the Myanmar community.
Stand to WIN air tickets to Singapore to visit INTERPOL World in July 2019 (one pair to be won each day) and other attractive prizes worth more than USD 1,000!
Join us at the third edition of Myanmar Security Expo 2018 to SOURCE, NETWORK and SHARE KNOWLEDGE
If youasupplier or distributor of surveillance solutions, CCTV, video analytics, biometrics, identity management system, access control system, cybersecurity software and other security solutions, and are looking to expand in Myanmar, Myanmar Security Expo is the right platform for you.
Contact Joyce CHEW at joyce.chew@mpinetwork.com
85% of the visitors are sourcing for new products and technologies
More than 80 brands and solution providers from 20 countries are showcased
77% of the exhibitors are satisfied
A glimpse of the last event